Etu esi kesaa faịlụ na netwọkụ Linux | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
Etu esi ekekọrịta faịlụ na netwọkụ Linux
ChrisADR | | GNU / Linux, Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Nke a na-aga onye ọrụ ibe anyị bụ Claudio, onye chọrọ ịmụta etu esi ahazi netwọkụ Linux n’etinyeghị Samba. N'okwu a na-enweghị omume enyi, Claudio rịọrọ ka e kee GUI iji nwee ike ịrụ ọrụ nke ọtụtụ puku mmadụ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị nde) ndị mmadụ emegoro ma ga-aga n'ihu na-eme ya ... n'ihi na ọrụ a dị ukwuu bụ nkasi obi, ọ nweghịkwa mmasị na ya Ọtụtụ na-ahọrọ ịmepụta GUI iji nwee ike iji ya dị mfe (ọbụlagodi Windows dị ka ọ na-ekwu) netwọk ya dị n'ime. Ka anyị buru ụzọ banye na nke a ntakịrị tupu azịza ya.
1 Ọnọdụ azụmahịa na FOSS
1.1 Lọ ọrụ dị otú a na-ebi na ngwanrọ ya
1.2 Emere ya iji mee ka ị dabere
2 Dị mkpa bụ nne nke okike
2.1 Mgbe ịkekọrịta folda na windo ị mepụtara oghere nchebe
2.2 Ọ dịghị mkpa
3 Iji ike emegbu mmadụ agaghị abụ ihe ngwọta ya
4.1 Kedu ihe kpatara o ji dị mkpa ịnweta ozi etiti etiti?
4.2 Anaghị m echepụta egbe
4.5 Akwụkwọ ederede (na Spanish !!)
4.6 Wụnye ihe nkesa na onye ahịa
4.7 Hazie ihe nkesa
4.8 Tinyegharịa ihe nkesa ahụ
4.9 Jikọọ na ihe nkesa
4.10 Mepee ihe nchọgharị gị
5 Echiche ikpeazụ
Ọnọdụ azụmahịa na FOSS
Ọfọn, ka anyị mee ka ọ dị mfe site na mbido ... Nke a bụ ihe a na-ekwukarị mgbe niile na FOSS (Free na Open Source Software) oru, enweghị mma nọ ọrụ. Anụla m mgbe niile, mana ọ dị juego ọ ka mma ịzụta ya n'ụlọ ọrụ tal n'ihi na ọ ka mma, mmemme dị otú ahụ bụ mejor karịa ya free version, ndị dị otú ahụ a usoro bụ mejor karịa ọzọ n'efu. Ka anyị lee ihe kpatara nke a:
Ụlọ ọrụ ahụ tal Viva nke ngwanrọ gị
Ọ bụrụ na m bụ ụlọ ọrụ na ọrụ m bụ ire ngwanrọ, nke ahụ pụtara na m ga-ere ihe dị oke egwu bueno n'ihi na ndị mmadụ na-azụ ya, ya mere m nwere na akwụ ụgwọ ndị mmepe m iji nweta ya, nke a bụ mmalite nke okwu a, sọftụwia na - akwụghị ụgwọ yana ụfọdụ na - emepe emepe emepe site na iheoma. A naghị akwụ ndị mmadụ ụgwọ iji mepụta ihe maka ndị ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị gwa m otú ị dị software o usoro ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mma karịa nsụgharị ya n'efu, ana m agwa gị, ikekwe, mana enwere nnukwu nsogbu na:
Emere ya iji mee ka ị dabere
Nke a dị ka ọgwụ, ka ị na-eji sọftụwia ị na-eji eme ihe, obere ike iche echiche na idozi ihe kwụ ọtọ. Ka anyị chee echiche maka nke a maka nke abụọ, ị maara ebe ị na-akpata ego karịa, na ire ahịa ma ọ bụ na ndozi? Azịza nke a dị mfe, n'agbanyeghị etu usoro ihe omume ma ọ bụ sistemụ dịruru, uru na ndozi ga-adịkarị ukwuu karịa uru dị na ire ere, n'ihi na n'oge nsogbu, ọ dịghị mkpa ego ole aga-etinye iji dozie ya n'ihi nanị ọ nweghị ike gbanwee akụrụngwa n'oge ahụ.
Dị mkpa bụ nne nke okike
Unzọ na-adịghị mma iji rịọ GUI abụghị ihe kpatara iji mee ya, n'otu oge ahụ, gbaghara ma ọ bụrụ na ọ na-ewute Claudio, mana enwere m ọtụtụ ihe dị mkpa m ga-eme na ọrụ m ga-esonye iji tinye oge m iji dozie enweghị gị obodo kwụụrụ gị na passivity uche gị. Mana ebe ọ bụ na ị jụrụ, nke ọma, anyị ga-akọwa ihe kpatara na enweghị GUI ma maka ihe ahụ Windows ọ dị mfe.
Mgbe ịkekọrịta folda na windo ị mepụtara oghere nchebe
N'ebe a ihe kariri otu ga-agwa m na ezighi ezi na wdg wdg ... mana eziokwu bụ na mgbe ị na-eji ya nmap Iji chọpụta kọmputa windo, ikekwe ọ bụrụ na ọ dị na netwọkụ "atụkwasịrị obi", ọ ga na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri ụfọdụ iji nwee ike ịkekọrịta faịlụ. Nke a abụghị naanị ihe dị ize ndụ, mana ọ bụ ihe amachaghị na ọtụtụ ọgụ na-aga nke ọma na-ebili n'ihi kekọrịta nweta site na netwọk. Ma gịnị kpatara nke a? Ọfọn n'ihi na nkà ihe ọmụma Windows na-akuziri gi ikwu SI n’amaghị kpọmkwem ihe na-eme. (Cheta na-adabere na ya?) Veryzọ dị mfe iji dozie nke a ga-abụ ilekọta akụrụngwa nke ọma, mana dị ka nkà ihe ọmụma Windows abụghị nke ahụ, ebe a bụ ebe mmezi abata n'ime egwuregwu, ma mee ka ị nwee mkpa onye ga-emere gị ihe.
Ọ bụrụ na mkpa bụ nne nke okike, na-enweghị mkpa, mgbe ahụ ọ nweghị ihe ọ bụla. Nke a bụ ihe dị oke nghọta nghọta, ọ bụrụ na ndị na-eji ya (na-abụkarị ndị nchịkwa sistemụ, ma ọ bụ ndị na-eji sava) achọghị ya, ha agaghị eke ya. N'ọnọdụ pụrụ iche (na-abụkarị na ngwanrọ n'efu) ndị okike na-etinye onwe ha ntakịrị n'ụkwụ nke ndị na-amachaghị ma kpebie Enyemaka ịmepụta GUI (Git nwere GUI maka ndị chọrọ ịnwale ya), mana ọzọ, nke a bụ maka dị ọcha iheoma nke ndị okike, ebe ọ bụ na ego ole ọrụ ezigbo bụ nnukwu ibu, na mmepe dị ole na ole, na ndị ọrụ na-relegated na oge n'efu site na ụfọdụ ndị nwere ụdị obi. (Ka anyị cheta na ọ dịghị onye na-akwụ gị ụgwọ ime ya, ma ị ka nwere ezinụlọ, ọrụ na ibu ọrụ)
Iji ike emegbu mmadụ agaghị abụ ihe ngwọta ya
Were nke a dịka ndụmọdụ na ikwu maka ndị niile gụrụ ya, echetere m ọtụtụ vidio nke m hụrụ mgbe a na-agba ajụjụ ọnụ na Obama (onye m lere anya dị ka ezigbo ihe atụ nke mmadụ), ebe onye iwe na-amalite ịkatọ na ịkparị ya ma ọ meghị ya. enweghị ihe ọ bụla. O meghi ihe ọ bụla, ọ bụghị n'ihi na ọ nweghị ike, ya bụ, ọ bụ nwoke kachasị ike na mbara ala n'oge ahụ, mana n'ihi na ọ maara na ya ekwesịghị iweda onwe ya ala n'ọkwa ahụ. Nke ahụ abụghị na ọ gaghị abụ ihe ngwọta na ndụ a, ịbanye na esemokwu agaghị ewetara ezi ihe ọ bụla, enwere ndị nwere ike ikwenye na ọ na-eme, mana opekata mpe ụjọ na nkọwa nke X agaghị akwali m. omume rụrụ tupu ịmalite nkuzi.
Sistemụ Njikwa Ntanetị bụ usoro ntinye akwụkwọ nke na-enye ozi etiti y mekọrịta na a na netwọk, ọ na-arụ ọrụ ma maka Linux usoro dị ka Windows na ndị ọzọ (a n'ihi na e mere iji ọkwa ngwa). Otu anyi si ekwu okwu etiti, ọ pụtara na anyị na-eche ihu ngwọta nke ndị ahịa / Server. Anyị emetụla aka na nke a na oge ọzọ, mana ọ nweghị ihe ọzọ iji mesie obere nkọwa ike.
Kedu ihe kpatara o ji dị mkpa ịnweta ozi etiti etiti?
Onye ọzọ ga-asị, «ma enwere m ozi dị mkpa na ụdị igwe ọ bụla m nwere, laptọọpụ ọrụ, kọmpụta ụlọ, wdg wdg ». Nsogbu a bụ ihe ndị na-esonụ, ọ bụrụ na agbasoro usoro nkwado ndabere nke ọma, mmadụ ga-achọpụta na ịmepụta na jigide nkwado ndabere nke ọtụtụ isi dị mgbagwoju anya, dị mfe karị (maka anyị niile na-eji edemede na ndị ọzọ) bụ ịmepụta otu isi ebe ozi ahụ rutere ma site n'ebe ahụ bido ichekwa data ahụ. Na mgbakwunye inwe otutu nsụgharị na isi ihe dị iche iche ọ bụghị naanị na-eme ka o sie ike ịgbaso ozi ahụ, mana ọ na-emekwa ka ọrụ ahụ dịkwuo mgbagwoju anya.
Anaghị m echepụta egbe
Maka ndị nke abụọ kwenyere na achọpụtara m nke a site na nnwale na njehie, n'ihi na ọ nweghị ihe ọzọ site n'eziokwu ahụ, naanị m na-eji ntakịrị ihe Google nyere m ma ka anyị hụ ihe m chọtara na nyocha mbụ (m ga-eche na ha nọ na Ubuntu) ndị na-eji ya, echere m na maka Fedora mgbanwe kwesịrị ịdị ntakịrị)
Na-agbaso ihe ọ na-ekwu mgbe niile Oficial. Nke a bụ ikekwe otu n’ime usoro mbu ị ga - agbaso, etinyekwara m ya na ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na m maara ihe gbasara NFS tupu ede ederede a.
Ogologo oge; agụla. Oge obula ha huru okwu achoputara a, ha puru ijide 100% na obu uzo “umengwụ” ka esi dozie nsogbu, otutu g’esi n’uzo esi amata ma obu na bekee, ofuma, ugbua ka ha matara ya ka oghara inwe ochicho ozo ichoro mgbe emechara A na m eji dicciontary mepere emepe ghọta nke ọma ọtụtụ n'ime echiche ndị a.
Akwụkwọ ederede (na Spanish !!)
Ufodi obi nwere obi oma were oru nke itughari anyi akwukwo a di mfe ma mezue ya na ihe nile di nkpa iji tinye ihe oru NFS na netwok anyi.
Anyị ga-ahụ ngwa ngwa usoro ị ga-eso. M ahapụ gị njikọ maka ndị na-achọ ịmata ndị na-enweghị ike iji Google maka ihe X kpatara ị ga-aga otu ebe.
Wụnye ihe nkesa na onye ahịa
Ugbu a, anyị ga-arụnye site na njikwa ihe achọrọ na ebe abụọ iji jiri faịlụ ndị a na-akọrọ. Na ihe nkesa anyị wụnye nfs-kernel-server na onye ahịa nfs-common
Hazie ihe nkesa
NFS na-arụ ọrụ site na nhazi faịlụ dị na /etc/exports. Faịlụ a na-agwa NFS nke faịlụ ịkekọrịta yana otu esi akpọ ha, na mgbakwunye inwe ezigbo ihe atụ nke etu esi eji ya na ndabara, anyị ga-eji njikwa dezie ya ekele na mgbe niile pụrụ ịdabere na vim (ndị na-adịchaghị mma na vim nwere ike iji nano)
Maka ihe atụ a dị mfe m na-agwa ndị na-ebupụ na m chọrọ ịkekọrịta folda m workspace (na.) * na-egosi na achọrọ m ịkekọrịta ọdịnaya niile na ịhapụ ịhapụ ohere m dere ikikere na nhọrọ nke kachasị m mma, na nke a rw maka ide na ịgụ)
Tinyegharịa ihe nkesa ahụ
Ọ bụrụ na anyị ahazi nke ọma, anyị kwesịrị ịmalitegharị ihe nkesa ahụ (ma ọ bụ bido ya ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ), ọ dịghị mkpa oge ọ bụla enwere mgbanwe, mana m na-ewere ohere iji mee ka o doo anya, ọ bụrụ na ịchọghị ịmalitegharị ihe niile, ihe dị mfe exportfs -ra dozie nsogbu ahụ.
Ahịrị nke mbụ systemctl start nfs-kernel-server na-eme ka ihe nkesa ahụ rụọ ọrụ, nke abụọ bụ iji nyochaa na ihe niile dị mma (ọ bụrụ na ọ bụghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ dịghị mma).
Jikọọ na ihe nkesa
Ugbu a, anyị ga-ejikọ akụrụngwa anyị ndị ọzọ, maka nke ahụ anyị ga-eji ya njikwa, na iwu mount.
N'ebe a, ọ bara uru na-ekwusi ike na e kenyere IP ndị masịrị gị, amaghị m ma ha ga-eji DHCP ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka, mana ozugbo ha nwere IP ha nwere ike iji ya, ha agbakwunye : / ụzọ / nke / gị / nchekwa na ebe ị nwere ike ịrịgo njikọ ahụ, n'ọnọdụ m ka m mepụtara folda akpọrọ compartido.
Mepee ihe nchọgharị gị
Lee ha abụọ nọ na nsụgharị njikwa dị ka nsụgharị GUI. M na egosikwa gị ntakịrị otu m si arụ ọrụ m na ụlọ akwụkwọ ahụ, a na m eji igwe eji arụ ọrụ mgbe niile iji rụọ ọrụ ozi nke nkuzi ahụ, (ọ bụ ya mere ha ga-eji tinye OSX) yana otu maka asụsụ ọ bụla, yabụ enwere m ike ịchịkwa gburugburu mmepe na Ejuputala Gentoo m na mmemme na-enweghị isi. Gini kpatara ubuntu? ọ masịrị m karịa Fedora ọ dịkwa ọsọ ọsọ ịmepụta igwe nyocha nke m nwere ike ihichapụ ngwa ngwa. Dị ka m kwuru 🙂 onye ọ bụla na-agbaso nkà ihe ọmụma ha ma hapụ ihe ọ bụla dị njikere jiri n'echeghị echiche Ọ bụ ihe na - eme ka Ubuntu dịkwuo nfe maka ndị ọrụ ya 🙂 (na mgbakwunye na m mere asambodo m dịka onye nchịkwa sistemụ na Ubuntu (LFCS na-enye gị ohere ịnye ya n'ime ezinụlọ atọ dị ukwuu nke sistemụ: Ubuntu (Debian), CentOS (Red Hat) na SUSE (SUSE) ), ya mere ọ bụ ụzọ dị mma iji cheta apt-get y apt)
Edeela m ọtụtụ oge n'oge a, mana dịka ị nwere ike ịhụ Claudio, ọ bụ naanị usoro 4 (enwere m olileanya na ị nwere ike ịme Google n'onwe gị ka ịghara ịgụ), ma maa ihe and ịchọghị GUI maka iwu ise. Ndo ma ọ bụrụ na enweghị m ike imeju ọchịchọ gị ime ụwa GNU / Linux tinyere Windows, ma gbochie gị iche obere ma mụta google ngwongwo. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe mgbanwe na-adịgide adịgide na netwọk gị na akụrụngwa site na /etc/fstabỌfọn, ị ga-achọta ya n'onwe gị.
Maka onye ọ bụla ọzọ, biko gbaghara m ma ọ bụrụ na m na-akparị post a, ọ bụ ezie na edere m ya ntakịrị iwe (m ga-ekweta na ọ dịghị onye nwere mmasị ịjụ ajụjụ banyere ọrụ ya na mbọ ya, yana ọbụlagodi karịa akpọ swagger) ... Enwere m olile anya na nke a nwere ike inyere aka karịa otu na ọrụ njikọ ha. Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịbịbịa ebe a n'agbanyeghị nsogbu na mmejọ m, Ekele 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi ekekọrịta faịlụ na netwọkụ Linux
Ihe 34 kwuru, hapụ nke gị
Miguel Mayol na Tur dijo
M gbasoro usoro maka Manjaro (Arch) laa azụ n'ụbọchị ahụ ọ naghị arụ ọrụ maka m (M na-eso Samba) na Thunar na Nautilus na-ekerịta plugins
Banyere "windowizing" achọpụtara m na KISS bụ FLOSS na-ekwesịghị ekwesị. Na MS WOS enwerekwa ihe ndị gbagwojuru anya ime, na nke ọ bụla ọ dị ka ọ dị mma maka onye ọrụ.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji nye edemede ma ọ bụ meta-ngwugwu nke na - etinye ma na - ahazi NFS kama i copomi ma zipu iwu 5?
Ọ bụghị ọtụtụ mmadụ na-anwa ike na nke mbụ, ma ọ dịkarịrị nke abụọ
Ma ọ bụrụ na anyị gbakwunye ngwa mgbakwunye maka òkè NFS na Thunar na / ma ọ bụ Nautilus (ma ọ bụ ndị ọzọ) ka mma maka FLOSS na KISS, nri?
Anaghị m ede na ọ bụ ihe omume ụlọ akwụkwọ gị, mana m ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na mmadụ ga - eme ya (maka Samba maka ndekọ ahụ) wee jiri ya dịka ngwaọrụ ọzọ iji "tọghata" ndị mmadụ na nkuzi GNU / Linux etu o si dị mfe ịkekọrịta folda karịa NFS (ma ọ bụ Samba) iji ya site na Smart TV na Kodi
Zaghachi Miguel Mayol i Tur
Octavio Sanchez dijo
Gịnị ma ị gbalịa ime ya n'onwe gị? N'aka ozo, oburu na ichoro na odi nkpa ma baa uru maka FLOSS na KISS, ga n’iru ma mekota obodo na uzo ahu.
Zaghachi Octavio Sánchez
Enweghị m ihe ọmụma ahụ, mmemme.
N'aka nke ọzọ, ha abaghị uru nye ndị nwere ha ma chọọ ime ya.
Ma ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ sayensị kọmputa nke chọrọ igosi ụdị ihe ahụ na CV gị, ka mma.
Banyere ihe rụụrụ m ọrụ, na-eme ya na SAMBA Enweela m ebipụtara nkuzi a chịkọtara na nzukọ Manjaro maka ndị ga-erite uru na ya https://forum.manjaro.org/t/suggestion-samba-and-or-nfs-shares-and-plugins-easy-by-default/34169/4
RAFAEL PRESILLA dijo
Maka onye ahịa ma ọ bụ onye ahịa, olee otu anyị ga-esi hapụ ọrụ ọrụ a site n'aka ndị ọrụ?
Zaghachi RAFAEL PRESILLA
Ndewo Rafael, iji nwee ike ịhapụ ha site na ndabara na mmalite nke igwe ọ dị mkpa iji dezie faịlụ / wdg / fstab ka o wee jikọọ na netwọk ahụ, ebe ọ bụ na ọ dịtụkwuo ọkachamara ma ana m ewere na ị na-ajụ ya na mpaghara azụmahịa, enwere echiche nchebe ndị ọzọ dịka ikikere na aha nnweta, isi ụzọ, ndekọ, na ndị ọzọ. Ekele 🙂
Ọnye na -bụ Carlos Diaz? dijo
Ọfọn, m na-amalite ụwa a nke Linux, m na-agụkwa ihe niile ị bipụtara n'oge na-adịbeghị anya, anaghị m aghọta ihe ederede gị na-ekwu na ọgụ ị na Claudio nwere, mana m ji oge ị na-ede ede ugbu a kpọrọ ihe. ịkọrọ gị ihe ọmụma, ndị kasị nta anyị nwere ike ime na-adịghị akwụ ụgwọ maka ya, bụ na-agụ gị na-akwanyere! Ana m ekele gị nke ukwuu na ekele m maka ọrụ dị oke mma.
Zaghachi Carlos Diaz
Ndewo Carlos, lee njikọ njikọta
Ọ bụghị ọgụ dị ukwuu, nke ahụ ga-apụta na enwere m olileanya na m ga-aga n'ihu na isiokwu ahụ, mana mgbe m gụsịrị ihe ndị gbara ya gburugburu, enwere m olileanya na ị nwere ike ịghọta ihe kpatara obi ọjọọ m, ma ọ bụ na ọ nwere ike ọ bụrụ na m kwubiga okwu ókè, n'ọnọdụ abụọ ọ bụghị ihe m bu n'obi ịga n'ihu 🙂
Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị, ọ bụ n'ezie n'ihi okwu ndị dị ka nke a na enwere m obi ụtọ ide na ikekwe mụ na unu niile na-agụkọ oge a 🙂 ekele
na post ihe niile di nma, ihe m na-eme »share» at all is that OBAMA BU ONYE EZI OMA !!!!! otu n'ime ndị kasị ukwuu na-agba ọsọ na akụkọ ihe mere eme na Israel…. nkekọrịta nke folda na - aghọ obere data mgbe ị gụsịrị ESO.
Anọla m Linux kemgbe ọtụtụ afọ ma ana m akwado ya ndị enyi m na-eji Linux, mana biko, ihe Obama siri ike.
Hi Ivan, daalụ maka iwepụta oge ịza ajụjụ na ịkekọrịta. Ọfọn, m na-atụle Obama ihe m tụlere (na ọ bụ ihe gbasara onwe gị, ị nwere ike ịkekọrịta ya ma ọ bụ na ọ bụghị, mana ọ bara uru ịkọwa ebe a) maka ihe ndị dị ka esta:
Maka ndị gụrụla akwụkwọ ndị ọzọ m dere, ma ebe a ma ebe ndị ọzọ, ị ga-amata na abụghị m onye "ndọrọ ndọrọ ọchịchị" nke n'echiche nke ịmara nke a, na n'ezie nke ahụ bụ otu n'ime nsogbu ndị m na-echekarị. Ọ na-amasị m ịnwale, mana m ga-eme ya mgbe ọ dị mkpa. Dika opi n’onwe ya kwuru n’oge na-adịghị anya ọ ghọrọ onye isi ala ... “nke a siri ike karịa ka m chere” ... anyị tụlerelarị na enwere ndị ojii, ndị ọcha na ndo, mana echere m na ezigbo ụzọ iji amata ha bụ ịmara ọnọdụ niile ... ma Nke ahụ bụ ihe na mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mgbagwoju anya n'ihi ọdịdị nke ọtụtụ ozi.
Ọ bụrụ na m na-ekwu na m na-ewere ya dị ka ezigbo mmadụ, ọ dabere na njiri mara ndu ọma ọ gosipụtara n'oge niile ọ nọ n'ọfịs ọha, anaghị m ekwu na ọ zuru oke n'ụzọ ọ bụla, mana o nwere ọtụtụ agwa tozuru oke iitatedomi. Echere m na nke a enwewo ike ime ka isiokwu ahụ dịkwuo nghọta.
In nọ na Taringa ga-ara gị.
Ma ọ bụ, m ga-ahapụ ya n'oge na-adịghị anya 😛 gbasara 🙂
carlos zevallos dijo
Samba maka m na-ezute ihe niile m chọrọ, ugbu a enwere m ya na-arụ ọrụ na ntanetị azụmahịa na ndị ọrụ na otu yana yana ikikere na folda ụfọdụ dabere na profaịlụ onye ọrụ, ana m eme ọfụma ma enwere m windo na ndị ahịa Linux.
Zaghachi carlos zevallos
Enwebeghị m ike ịbanye ụwa nke windo-linux nke ukwuu, ọ na-emekwa ka m nwee mmasi, mana ọ dị mma na ọ masịrị gị na onye maara, ọ bụrụ na ị ga-anwa anwa ide edemede banyere ya 😉 ekele 🙂
Carlos, samba dị ezigbo mma ịkekọrịta na netwọk Windows-Linux, mana okwu a bụ mgbe ị nwere netwọ LAN naanị na Linux. Samba anaghị arụ ọrụ na nke ikpeazụ ma ị ga-ebu usoro niile nke ChrisADR kọwara.
M na-emejuputa atumatu ya, kama ka m na-agụ na net:
ị nwere ike iwunye ihe nkesa samba na Linux ma yabụ na ọ dịghị mkpa na enwere windo ọ bụla iji jiri ya na netwọkụ.
Na saịtị ndị ọzọ: https://www.driverlandia.com/instalar-samba-para-compartir-carpetas-en-linux-debian/
Ahụrụ m na ebe ọ bụ na Win7 enwere ike ịnwe nsogbu na paswọọdụ, mana ọ ga-emetụta ndị ahịa win7,8,10 naanị na ọ bụghị ndị ahịa Linux ga-eji sava samba na Linux.
Openuse yast nwere modulu nfs, amaghi m ihe banyere okwu ndi a, gini bu karia, na manjaro nke ozo, ana m ewepu ngwugwu nfs n'ihi na anaghi m eji ya eme ihe obula, oge obula m muta ihe kariri m ewepu ihe na ya ka m gnome nri na m na-achọpụta na ha anaghị efe m ma ọlị, na nke nta nke nta ọ na-erepịakwa obere RAM, Echere m na mfe distros kwesịrị obere ihe arụnyere, achọpụtara m na ha na-ebu ọtụtụ ihe na onye mbido amaghị ọbụna ihe ha bụ, n'ezie na ọ bụrụ na onye edemede nke post tinye m gentoo, m ka ga-etinye 200 obere ngwugwu ma mee ihe niile m na-eme na manjaro, rue mgbe amaghị m, gentoo mebiri n'ezie.
N'ikpeazụ, n'isiokwu a, anyị ga-egosi ihe Richard Staliman na-ekwu ọtụtụ oge sọftụwia na - akwụghị ụgwọ apụtaghị na ọ ga - abụ n'efu, echere m na n'ọha taa anyị na - akwụ ụgwọ maka ama ama jupụtara na ngwanrọ ngwanrọ nke na anyị amaghị ihe niile ọ na - eme na kama anyị chọrọ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nke na - eme ka ihe ọ bụla dịrị anyị mfe ma nweere onwe ya, anyị ga - ejikwa iche echiche ntakịrị ma chọọ n'ihe banyere post a amataghị m banyere nfs mana ahụrụ m na opekata mpe na oghere a nwere usoro ihe osise maka nke a , Amaghị m ma ọ ga-adị mma ma ọ dị njọ.
Manjaro dị ukwuu ma dịkwa obere karịa ngwa ngwa.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale Gentoo (kwa) ana m akwado Sabayon.
Ọ bụ ihe etinyegoro ma dịkwa mfe Gentoo, ntakịrị ihe ma ọ bụ obere ihe Manjaro to Arch bụ.
Enwere m Sabayon na igwe mebere ihe ma nwekwaa ihe di iche na sabayon na gentoo kari nke di na manjaro na archlinux, sabayon jiri entropy dika onye isi ngwugwu ngwugwu (equo on console and rigorous on graph) nke bu ngwugwu uzo abuo, o nwere ogwe ma amaghi m kwadoro iji ya otutu. Manjaro na arch nwere otu njikwa ihe ngwugwu ahụ, gbanwee na ugbua na manjaro ị nwere ọtụtụ arụnyere na nhazi na ebe nchekwa, gentoo bụ iji akara iji chịkọta nhọrọ site na koodu guente, anyị bụ nnukwu ọdịiche na sabayon nke na-enye gị ụfọdụ nchịkọta. nke na-abịa site na gentoo ma na ọnụọgụ nhọrọ.
N'oge na-adịbeghị anya, a na m etinyekwa nsogbu ndị a, mgbe mmadụ na-amalite na Linux ọ na-akụda mmụọ ịghara ịchọta ngwọta ọsọ ọsọ ma ọ bụ ngwa kwesịrị ịnwe usoro bara uru ma ọ bụghị usoro siri ike. Ana m asọpụrụ ma na-ekele ndị mmepe na-ewepụta oge ha, ma nwee mmasị ịrụ ọrụ ha nke ọma, ha kụziiri m ma ọ bụrụ na mmadụ emee ihe n'efu ma ọ bụ na ekwesighi ime nke ọma n'ihi na ebe ahụ ọ na-ebu stampụ nkeonwe. Mana enwere oke. A na-asọpụrụ Linux n'ihi na ọtụtụ oge ọ na-eme mkpọtụ ịme usoro na ịwụnye ọrụ yana ndị niile sitere na ndị mmepe, ndị nwere ike melite ọrụ ha, hapụ ya ka ọ na-edo onwe ya n'okpuru iwu ogologo oge. Nke ọzọ oke bụ na e nwere ndị ọrụ na-aga site na "shei" ndị site na nkịtị ma ọ bụ nkwụsịtụ uche chọrọ ka mmadụ mee ha ihe niile.
Hi Ismael, daalụ maka ịkekọrịta na achọrọ m imesi ihe ole na ole ike ... UNIX na-eji nkà ihe ọmụma doro anya na mmepe nke mmemme "mee otu ihe, ma mee ya nke ọma", n'ihi ọtụtụ mmemme a na-eme otu ihe, nke ahụ bụ Ọ dị mkpa isonye ọtụtụ iji nwee ike idozi ọnọdụ "mgbagwoju anya". Anaghị m agọnahụ na enwere mmemme ole na ole nwere ike ịka mma, mana opekata mpe na ala ihe niile, ahụbeghị m mgbagha na mmemme GNU dị mkpa ma ọ bụ kernel. Ọ bụ ihe nwute na ụdị echiche ọjọọ a sitere na mmemme oge ụfọdụ nke "echeghị echiche" nke ọma.
Ekele enyi ChrisADR, o doro anya na ị maara ọtụtụ ihe gbasara nke gị, ana m ekele gị ma rịọ m mgbaghara ma ọ bụrụ na m dị obere na azịza m gara aga, na njedebe ma ọ bụ gui ọkachasị mmepụta. Ma site na post a, ị ka gosipụtara ihe m na-azọrọ na Linux, ụzọ dị mfe iji kesaa nchekwa na Linux LAN Network na dịka ị kọwara nke ọma na nke a dị ezigbo mma, ọ na-agwụ m ike dị ka onye ọrụ, na-eme ọtụtụ nzọụkwụ na ọnụ iji nwee ike ịkekọrịta folda ahụ na ntanetị Linux. M na-ekpeghachi, ekele maka post a na ọ ga-aba uru nye ọtụtụ, ọ bụghị m, ọ dị nwute. Ana m atụ anya ọtụtụ ihe karịa site na Linux. Maka ugbu a, aga m aga n'ihu na-eji Guindous maka netwọ LAN m. Na n'ezie, na akwụkwọ m, m na-aga n'ihu na MX Linux m hụrụ n'anya.
Ngwọta dị mfe nke m na-agakarị iji nweta ihe ịchọrọ bụ iji ya https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell_Filesystem y https://es.wikipedia.org/wiki/Files_transferred_over_shell_protocol.
Ndewo Claudio 🙂 daalụ nke ukwuu maka inye gị oge ịkekọrịta, na ekele maka mgbaghara gị, gbaghara m ma ọ bụrụ na m na-akparị ebe. Ọfọn, agbanyeghị na ihe ị gwara m bụ ihe ihere, enwere m ndụmọdụ maka gị; Ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ ọrụ bara uru yana na ihe karịrị otu nwere mmasị, anyị nwere ike ịjụ ọrụ iji mejuputa ya dị ka nkwalite mmelite 🙂 Onwe m enweghị oge ma ọ bụ ihe owuwu ahụ iji mepụta mmemme niile site na ncha, mana enwere ike ndị ọrụ ibe anyị site Nautilus (GNOME) ma ọ bụ Dolphin (Plasma) nwere ike ịnwe ya na ndepụta ha ruo mgbe ụfọdụ ndị nrụpụta nwere ike ịzụta oge ahụ, ma eleghị anya ịme ya ngwa ngwa karịa m :)
Ọ bụrụ na ịchọrọ echiche a, anyị nwere ike ịhụ ọnụ otu ebe na ebee ga-ebipụta nkwalite nkwalite ahụ, onye ma ma eleghị anya ihe yiri nke ahụ esighe ebe ọ bụla 🙂
M arụnyere Syncthing na enweghị nsogbu ọzọ. Ana m etinye ya ebe a dị ka ihe ọzọ.
Ndewo, ekwenyere m na ebe ọ bụ na ChrisADR dị na blọọgụ a, m na-eche nke na-esote, ị mụtara ihe na ya, daalụ maka nke ahụ, na usoro ọzọ yana ịgbaso otu isi ihe post.
Ihe a na-ekwu bụ na m ga-e copyomi ụfọdụ faịlụ site na ATM ma nyefee ya na ihe nkesa (GNU / LINUX), ana m arụ ọrụ na usoro nchekwa, mana enwere m ọnọdụ na m na ATM na-arụ ọrụ ma enweghị m ike imeghe ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla, enweghị m windows ọrụ nnyefe faịlụ na ntanetị, enweghị m ike iji ftp ma. Enweghị m ngwá ọrụ maka nke ahụ, ọ akọwapụtara oke ọrụ ma enweghị ngwaọrụ maka ya.
Mana amaara m na enwere ihe dịka SSH na SCP nakwa na ha niile bụ ngwaọrụ echedoro ruo ebe ahụ nke ọma, mana kedu ka esi etinye SSH na windo? ọ bụghịkwa mmemme nke na-enye m ohere iji usoro ahụ, achọrọ m ihe dị iche iche, achọrọ m ihe nwere interface CLI, o doro anya na amaghị m ihe ọ bụla, mgbe m na-eme nchọpụta m chọpụtara ọbá akwụkwọ Python nke na-enye gị ohere iji usoro nkwekọrịta netwọtọ dị iche iche na ime nyocha banyere otu o si arụ ọrụ, Enwere m sistemụ arụmọrụ, ebe anaghị m eji samba ma ọ bụ SFN mana enwere m ike ịnyefe faịlụ site na iji usoro nchekwa dị mma.
Ebe m chọrọ inweta na nke a bụ na ịmara eke ma mara na ihe dị (ssh), mechaa ọrụ ahụ enyere, ọ bụrụ na m bụ onye ọzọ m gaara ekwu, nke ahụ agaghị ekwe omume, achọrọ m ịkwado ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ rụọ ọrụ atụmatụ windo ma ọ bụ nke ahụ enweghị ngwá ọrụ na-enye m ohere nke ahụ.
Ma ọ naghị aga na isiokwu ahụ, mana ọ bụrụ na ị jụọ m ihe kpatara m ji ahọrọ CLI karịa GUI, naanị CLI bụ reusable na nke na-enye ya ike karịrị ikike karịa eserese ahụ. Enwere ike iji ihe omume CLI mee ihe site na mmemme ndị ọzọ (ihe mkpuchi) eserese naanị maka onye ọrụ.
Ndewo 🙂 Ọfọn, daalụ maka ihe ị na-ekwu, daalụ maka ịkekọrịta ahụmịhe gị.
Dịka i kwuru, CLI dị ka anwansi n’azụ igwe, anaghị amata mgbe niile, mana na-enweghị ha ọtụtụ ihe a pụrụ ịhụ (GUI) agaghị arụ ọrụ ma ọlị.
Arturo J. Ducoing Na Na Na dijo
Enwela obi nkoropụ, cheta na onye ọrụ Windows dị ezigbo iche ma ọ bụghị ruo mgbe sistemụ a na-emebi ịdị adị ha ka ha na-amalite mgbe ụfọdụ ịjụ uru ọ bara, ọbụnakwa na mgbe ahụ ha laghachi iji ya.
Ndị ọrụ Windows dị iche iche, ụfọdụ na-enye mmụọ ọjọọ karịa ndị ọzọ, anaghị eji ya agụ akwụkwọ, ọ bụ ya mere na ị kpọtara ha na gburugburu GNU / Linux ha na-ata ahụhụ nke ukwuu.
M na-eji ozi gị ọtụtụ, ekele maka ịkekọrịta.
Zaghachi Arturo J. Ducoing O.
eurekaaaa, emesịrị m chọta ihe m chọrọ, "a na-emepe emepe emepe site na ezi uche." Nke ahụ doro anya ma bụrụ nke kwesịrị nnọọ ịja mma, o doro anya na enwere onye nwere otu mkpa ahụ dịka m ma mepee (ma ọ bụ kerịta) enweghị m ike ịgụ ihe niile, azịza m chọrọ nke ukwuu. Ma ee, nke ezi uche, "akọrọ" na m nwere ekele dị ukwuu. Mana dị ka okwu mmalite nke post a si kwuo, "ị ga-akwụ ụgwọ maka ezigbo azịza", o doro anya na agaghị m akwụ ụgwọ, mana agaghị m etinye njikọ ahụ ebe m chọtara azịza ya, n'ihi na oge m bara uru nke ukwuu, anaghị m ana ma ... o were oge ịchọta. Enwere m ike ịza ndị nwere mmasị ma nwee otu nchegbu ahụ, na ị nwere ike ịchọta ya na yuotube. 🙂
Rams Castaway dijo
Lee ka o si dị mfe "ịchọ" azịza ma mee ka mmadụ wepụta oge kọwaara gị ya nke ọma n'ụzọ zuru oke na-akwụghị gị ụgwọ ọ bụla. ChrisADR (onye m na-amaghị) akwụghị penny maka nke ahụ, mana ị na-ekwu n'ihi ịchọ ọdịmma onwe gị nanị ịchọta akụ nke onye ọzọ, na-enweghị uru, keere, ma ị jụ inye njikọ ahụ (n'ụzọ, ọ dịghị mkpa). Amaghị m onye ị bụ, ma m ghọtara na omume gị na-ahapụ ọtụtụ ihe ịchọrọ. Cheta na ọ bụghị gị na onye mepụtara ya "ezigbo azịza (nke a ga-ebo ebubo)" emeghị ya. Nke ahụ bụ naanị na-eme ka ị bụrụ nje (ụdị nke ịdọ aka ná ntị. Mmekọrịta chiri anya nke otu n'ime ndị so na ya (parasite ma ọ bụ onye nnabata) ahụ dabere na nke ọzọ (onye ọbịa ma ọ bụ onye ọbịa) wee rite uru ụfọdụ.) Rịba ama: M tinyere gị ihe ọ pụtara ka ị ghara inwe nsogbu ịchọ ya, ebe ọ bụ na oge gị bara nnukwu uru.
Zaghachi Rams Castaway
O doro anya na ị ga-enwerịrị ụfọdụ ihe ọjọọ n'isi gị, ebe ọ bụ na ị na-erite uru kwa ụbọchị site na ozi ndị mmadụ tinyere ebe a na mgbe na "dịka" ị nwetara ihe bara uru ị jụ ịkekọrịta ya, iji zere nke a akaụntụ gị na-aga Iji kagbuo, IP gị amachibidoro ma ọ ga-abụrịrị na ị ga-eme nyocha mgbe niile ka ị ghara ịbanye na FromLinux n'ihi na ọ bụrụ na obodo a nwere ihe, ọ bụ maka ndị mmadụ, ọ bụghị maka nje.
Ernesto Iglesias dijo
Nke mbu ekele maka post, o bara ezigbo uru, obu ezie na odighi nfe ka ha choro icho ya, karia ihe ichoro. Agbanyeghị, achọpụtara m na ọ na-ewe iwe ma na-enweghị mmeghe na mmeghe na enweghị nkọwa ọ bụla metụtara nsogbu ahụ, ọ bụrụ na ọ bụghị onye edemede ahụ achọghị ịzaghachi nke ọma, onye ọzọ ga-aza ya na ọ gaghị akpọ ya Ezigbo Onye Sameria mgbe ọ kwusịrị ozi ahụ na iwe . Ka o sina dị, daalụ. Banyere ma ha na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na ha anaghị akwụ ụgwọ, maọbụ ọ bụrụ na ha emee ihe niile "maka ịhụnanya ndị ọzọ" abụghị ihe kpatara ịme ihe "site na ọkara" na "Google onye ọzọ", n'ihi na ọ bụghị mmadụ niile kwesịrị ịma ihe niile ma ọ bụ "detuo na nrapara »Koodu putara iji isi gi ma obu ighota ihe obula. Ekele m unu niile, unu abọọkwa nụ ụtụtụ
Ihe m chọrọ bụ na-efego a nchekwa na NTFS ike mbanye na m ketara na Windows. Enwere m ike ịnweta ma dee ya site na igwe m dị elu mana enweghị m ike ịrịgo ya na laptọọpụ etinyela m NFS nkesa na isi igwe na onye ahịa na laptọọpụ. M nwara ihe niile mana ọ nweghị ikpe.
Anaghị m agwa gị dijo
Ziga ihe nzuzu nke anaghị eme ihe ọ kwere nkwa.
Zaghachi ka notelodigo
Ọnwa mbụ anyị ọnụ :)
Agha dị nsọ: Otu n'ime nsogbu kachasị * NIX